देउवाः दिनभर दौडधुप साँझ शिथिल : RajdhaniDaily.com
Home भर्खरै देउवाः दिनभर दौडधुप साँझ शिथिल
काठमाडौं । प्रतिनिधि सभामा हाल कायम सदस्य संख्याको बहुमत नपुग्ने अवस्थापछि नेपाली कांग्रेस वैकल्पिक सरकार दाबी गर्नबाट ‘ब्याक’ भएको छ । लामो कसरत र प्रयासपछि आफ्नो पक्षमा संख्या जुटाउन नसकेपछि कांग्रेस बहुमतको वैकल्पिक सरकार दाबी गर्नबाट पछि हटेको हो ।
कांग्रेसले गत २७ बैशाखमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद्मा विश्वासको मत लिन नसकेपछि सरकारमाथि दाबी गर्ने भन्दै विपक्षी दलसँग सघन छलफल अघि बढाएको थियो । त्यसक्रममा विपक्षमा नै रहेको नेकपा माओवादी केन्द्रको समर्थन पाए पनि जनता समाजवादी पार्टीको सिंगो समर्थन प्राप्त गर्न नसकेपछि कांग्रेस सरकार दाबीबाट पछि हटेको हो ।
कांग्रेस सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले कांग्रेसको मात्रै संख्याले बहुमत नपुग्ने अवस्था भएको र जसपाले साथ नदिएपछि सरकारमाथि दाबी गर्ने अवस्था नरहेको बताए । कांग्रेसलाई जसपाभित्रको उपेन्द्र यादव र डा. बाबुराम भट्टराईले भने वैकल्पिक सरकार गठनका लागि सहयोग गर्ने वचन दिएका थिए ।
तर, बिहीबार दिनभर एमालेकै माधव नेपाल समूहको निर्णयसमेत कुरेको कांग्रेसले सो समूहको राजीनामा नआउने अवस्था विकसित भएपछि सरकार दाबी प्रयासबाट पछि हटेको हो । कांग्रेसले अन्तिम अवस्थामा पनि जसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र नेता राजेन्द्र महतोसँग छलफल ग¥यो । तर, उनीहरू कांग्रेस नेतृत्वको सरकारका लागि तयार नभएपछि सभापति देउवाले माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई आफ्नै निवास बोलाएर अवस्थाबारे जानकारी दिए ।
देउवाले बिहीबार साँझ नै पदाधिकारी बैठक बोलाएर अवस्थाबारे जानकारी गराए । त्यसक्रममा उनले सरकारमाथि दाबी गर्ने अवस्था नबनेको ‘ ब्रिफिङ’ नेतासमक्ष गरे । कांग्रेस निर्णयसँगै प्रधानमन्त्री पदमा ओली नै पुग्ने पक्का भएको हो । नयाँ सरकार गठनका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट गत सोमबार राति नै आह्वान भइसकेको छ ।
राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार बहुमतीय आधारमा नयाँ सरकार गठनका लागि आहवान गरेकी थिइन् । सो व्यवस्थाअनुसार प्रतिनिधि सभामा रहेका दुई वा दुईभन्दा बढी दलले बहुमत पु¥याएको अवस्थामा सरकारमाथि दाबी गर्न सक्छन् । यसअघि, प्रधानमन्त्री ओलीले संसद्मा विश्वासको मत लिँदा भने जसपाको ठाकुर र महतो समूह तटस्थ बसेको थियो ।
स्मृति रेग्मी -
डडेल्धुरामा क्वारेन्टाइनबाट घर गएका युवकको मृत्यु
डडेल्धुरा । डडेल्धुरामा क्वारेन्टाइनबाट घर गएका एक युवकको मृत्यु भएको छ । भारतबाट फर्केर क्वारेन्टाइनमा बसी घर गएका अजयमेरु गाउँपालिका-५ का २६ वर्षीय पुरुषको मृत्यु...
दुई उपसचिवसहित १३ अधिकृत बेपत्ता
काठमाडौं । कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका दुई उपसचिवसहित १३ जना अधिकृत वर्षौंदेखि काम छोडेर बेपत्ता हुँदा पनि मन्त्रालयले उनीहरूमाथि कारबाही गर्न सकेको...
Exclusive महेश्वर गौतम - July 26, 2020 0
संखुवासभा । संखुवासभाको सिलिचोङ गाउँपालिकामा १३ बर्षीय बालिकालाई बन्धक बनाएर बलात्कार गर्ने पक्राउ परेका छन् । बन्धक बनाएर बलात्कार गरेको आरोपमा प्रहरीले भोजपुरको साल्पासिच्छो...
एपीएफ अपराजित रहँदै फाइनलमा
Not-to-be-missed राजधानी समाचारदाता - April 9, 2021 0
काठमाडौं । नेपाल एपीएफ क्लब ललितपुर मेयर वुमन्स च्याम्पियनसिप टी–२० क्रिकेट प्रतियोगिता लिग चरणमा अपराजित रहँदै फाइनलमा प्रवेश गरेको छ । एक खेलअगावै फाइनलमा...
Not-to-be-missed एजेन्सी - May 20, 2021 0
मुम्बई । बलिउड अभिनेत्री मल्लिका शेरावतले बलिउडमा नातावाद र गुटबन्दीको ठूलो विभेद रहेको बताएकी छन् । उनले बलिउडमा जारी नातावाद कृपावादको विरोध पनि गरेकी...
अन्तर्राष्ट्रिय सगरमाथा संवादको तयारी पूरा
Not-to-be-missed महेश्वर गौतम - February 10, 2020 0
काठमाडौं । सरकारले आगामी २१ र २२ चैतमा आयोजना गर्न लागेको ‘अन्तर्राष्ट्रिय सगरमाथा संवाद’को सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको छ । राष्ट्रिय, क्षेत्रीय, अन्तर्राष्ट्रिय तथा...
बलिउड प्रस्ताव छाडेर नेपालमै रमेकी ज्ञानु राणा
Not-to-be-missed महेश्वर गौतम - November 3, 2020 0
काठमाडौं । उमेरले ७० वर्ष नाघिसकेकी छन्, गायिका ज्ञानु राणा । तर, अहिले पनि गायनमा उत्तिकै जोस र जाँगर छ । यसै साता मात्र...
प्रदेश ३ महेश्वर गौतम - July 10, 2020 0
काठमाडौँ । चर्को भाडा लिएर यात्रु बोक्ने १६ निजी सवारीसाधन ट्राफिक प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ । महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाको टोलीले काठमाडौँ उपत्यकामा प्रयोजन...
नगर कार्यपालिकाको बैठक पाँच महिनादेखि अबरुद्ध
प्रदेश ४ महेश्वर गौतम - March 17, 2020 0
लमजुङ । लमजुङको कान्छो राइनास नगर कार्यपालिकाको बैठक पछिल्ला पाँच महिनादेखि अबरुद्ध छ । मेयर, उपमेयर र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बीचको मनोमालिन्यका कारणले बैठक...
Not-to-be-missed महेश्वर गौतम - March 22, 2020 0
संकुचन आउन नदिन विशेष कार्यक्रम ल्याउने सरकारको तयारी काठमाडौं । सरकारले अर्थतन्त्रमा संकुचन आउन नदिन उपयुक्त कार्यक्रम ल्याउने भएको छ ।...
लुटमा मस्ती गर्नेको अर्बौं रुपैयाँको खोजी कहिले ?
बिचार महेश्वर गौतम - February 12, 2021 0
गत दुई वर्षको अवधिमा मात्रै ३० अर्ब भन्दा बढी राजस्व छली भएको पाइएको छ । राजस्व अनुसन्धान विभागको छानबिन दायरामा आएकाहरूको तथ्यांक केलाउँदा मात्रै...
पूर्णभक्त दुवाल - June 22, 2021
नन्दा थापा - June 17, 2021
दीपशंकर चौलागाई - June 17, 2021
काैशिला कुँबर - June 22, 2021